Indlela yokukhetha i-aquarium nge-Feng Shui
Izinhlanzi ze-Aquarium azidingi ukunakekelwa nokunakwa okukhulu, ungabuka ukunyakaza kwazo emanzini amahora. I-aquarium enezinhlanzi ezinhle izohlobisa kakhulu indawo yokuhlala yakho, izoletha ukuvumelana endaweni ephilayo. Imfundiso yamaShayina ye-feng shui ithi inhlanzi ye-aquarium iletha imali nenhlanhla endlini. Futhi ngesiShayina, igama elithi "inhlanzi" nelithi "ukuchichima" libhekwa yi-hieroglyph efanayo. Inhlanzi e-China ibhekwa njengophawu lomcebo nokuchuma.
Ukudoba ngaphakathi kwe-aquarium kuletha ukuchuma endlini, udinga ukulandela imithetho ethile, ngakho uncoma i-feng shui. Lapha into eyinhloko ukuthenga i-aquarium yobuningi obanele futhi athathe izinhlanzi ezinjalo ukuze bangadli. I-aquarium kufanele ibe nezinga elithile futhi kufanele kube nenani elithile lazo.
Okufanelekile, i-aquarium kufanele ibe nezinhlanzi ezintathu noma ngaphezulu, inombolo kufanele ibe yi-multiple of three. Usayizi olungcono kakhulu we-aquarium ungama-26x26x38 cm, ukuma kwe-aquarium kufanele kube okulungile - isikwele, i-octagon, umugqa, umbuthano.
Kusele ukukhetha indawo lapho i-aquarium izokuma khona. Ngokwe-Feng Shui, ayikwazi ukufakwa engxenyeni eseningizimu yekamelo, ekhishini, noma ekamelweni lokulala. Uma sifaka i-aquarium ngakwesobunxele bomnyango, izoletha amandla amandla, uma i-aquarium ifakwa eningizimu-mpumalanga yekamelo lokuphumula, uzobe ulindele ukuphumelela nokuchuma kwempahla.
Inombolo ethandekayo yenhlanzi e-aquarium - 9.
Thenga izinhlanzi ezi-1 ezimnyama nezinhlanzi ezingu-8 ezibomvu. Ngokwe-Feng Shui, zifanekisela ukuphelela nobunye bendawo yonke. Izinhlanzi ezimnyama ezingu-1 ziyi-Yin amandla nenyanga, nezinhlanzi ezibomvu ezingu-8 - amandla ka-Yan. Lezi zinhlanzi zizovikela indlu ekuhluphekeni. Ungadangali uma inhlanzi eyodwa ifa. Uma ikhaya lakho noma usengozini, inhlanzi ngokwayo ithatha amandla onke amabi futhi ivikele indlu ebubini.
Iyiphi inhlanzi okumele uyikhethe?
EMpumalanga Ekude, izinhlanzi ezijabule ziyi-carp, i-fishfish. Yenza kahle noma iyiphi inhlanzi yesiliva, igolide noma ebomvu. Awudingi ukuthenga izinhlanzi ngamahlombe abukhali.
Izimpawu zemali ze-feng shui
Ukuze udonse amandla wezomnotho, udinga ukuvuselela i-aquarium ngosizo lwempawu zemali - faka umkhumbi ngezingubo noma zemali, noma inhlanzi yokudonsa kathathu kuyo, noma kuwo. Ungakwazi ukufaka imali zemali zesiShayina kwi-Ribbon ebomvu.
I-oksijeni ipompo nesihlungi
Akudingeki ulondoloze kumpompo we-oksijeni nokuhlunga. Uma amanzi e-aquarium bubbles futhi ejikeleza, kuthuthukisa ukugeleza kwe-chi. Amanzi ase-aquarium kufanele ahlanzeke futhi izindonga akufanele zimbozwe ngodaka. Kungcono ukungabi ne-aquarium endlini, kunokuba ugcine ungcolile futhi ungcolile.
Izinketho ezithandekayo zokubeka i-aquarium ku-Feng Shui
Uma i-aquarium ikhona eduze komnyango kusukela emnyango, lokhu kuzobhekwa njengesimo esihle. Khona-ke "uzodonsela" enhlalakahleni yendlu nenhlanhla.
Uma i-aquarium ikhona ngaphandle komnyango, ukugeleza kwechi kuyadlula i-aquarium, ngeke kube nomthelela wamandla ekuqalisweni kwezindlu.
Uma i-aquarium ekhoneni, lesi sikhundla sibonisa "injabulo eyimfihlakalo" nokuyimfihlo.
I-aquarium iyona ndlela. Le ndawo inhle, inhle kakhulu enhloko yendlu nakubo bonke abaqashi.
I-aquarium kufanele ivumelane, yemvelo, into esemqoka, kufanele ithande wena.
Ukuze ukhethe i-aquarium ngokusho kwemfundiso yamaShayina kaFeng Shui, akudingeki uyiguqule futhi ukhumbule ukuthi udinga ukunakekela i-aquarium, ngoba uma kubonakala sengathi ixhaphozi elimnandi futhi ligcwala utshani, i-aquarium enjalo ngeke ikulethe injabulo noma ingcebo.
Yimuphi umshini ongcono ukuthenga
Yiziphi izitsha zekhishi okufanele umnikazi wekhishini ngalinye abe nazo ekhishini
Kusho ukuthini isikhumba esomile esikhwameni?
Bicoflex: isiqinisekiso samaphupho amahle
Ukufunda ukuthola indlela efanele
Ungenza kanjani ukwakheka kwamehlo aluhlaza?
Yenza ukwakheka okulungile kwamehlo aluhlaza okwesibhakabhaka
Ukuzivocavoca kulabo abagqoka izithende eziphakeme
I-psychology yobuso obuso
Sibutsetelo wezinwele izicathulo zentambo 2015
Iyiphi idivayisi engcono kakhulu ye-intrauterine?
Indlela yokwenza umuthi kaKhisimusi kusuka kwikhadibhodi: Isigaba samanje sonyaka omusha ngezandla zakho
Ulimi lwethu lukutshela ngani ngempilo yakho?
Izithelo ezimile - ingxube ye-vitamin
Ungamnika kanjani umuthi?
Ukuthuthukiswa nokukhuliswa kwengane